Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda Anti Tribalism Movement (ATM) - Anti Tribalism Movement : The ATM
Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda Anti Tribalism Movement (ATM)
Marka laga soo bilaabo 17kii bishii January ee sanadkii 2010kii oo aheyd markii dhidibada loo taagay Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) oo ay hoggaamiyaan dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa mar weliba waxaa si weyn u sii kor-dhayay taageerada aan ka helayno dadweynaha Soomaaliyeed ee jooga dunida oo dhan.
Waxa aan qabanay ama marti-galinay barnaamijyo kala gedisan oo ku saabsan qabyaaladd laga soo bilaabo sanadihii 2010kii, 2011kii, 2012kii, 2013kii, 2014kii iyo weliba sanadkaan 2015ka. Ulajeedadeenu waa in aan ka hortagno cudurka dilaaga ah ee Qabyaaladda, cudurkaas oo ah mid saameyn ku yeelanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Qabyaaladdu waxa ay horseed u tahay nacayb, xaq-darro, heyb-sooc, cunsurinimo, aargoosi, is eedeyn, xadgudub, cadaalad darro, nidaam la’aan iyo diinta oo aan lagu dhaqmin. Waxaa naga go’an inaan kaalin weyn ka qaadano wacyi-gallinta bulshada, taageeridda horumarka dhallinyarada, isku xirka dadkeena, la dagaalanka jahliga, dhiiri-gallinta ardayda, la xisaabtanka siyaasiyiinta iyo wax u qabadka dadka dhibaateysan ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisaba.
Waxaa xusid mudan in aynaan ka soo horjeedin QABIILKA balse aan ka soo horjeedno Qabyaaladda.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) waxa ay kaa codsanayaan in aad ku biirto ololaha ka dhanka ah Qabyaaladda, si aad nooga mid noqoto waxa aad gujisaa halkaan: http://www.theatm.org/become-a-member/
Waxa aad nagu taageeri kartaa aqoon, dhaqaale, fikrad iyo dhinacyo badan oo kale Insha’Allah.
One Million Membership (Hal Milyan oo Qof)
Barnaamijka One Million Membership waa barnaamij ula-jeedadiisu tahay in la helo ugu yaraan illaa iyo 1 Million oo qof oo ka qeyb qaata ololaheena ka dhanka ah Qabyaaladda.
Wuxuu OLOLAHAAN fursad siinayaa qof waliba oo doonaya inuu ka hortago Qabyaaladda, waana olole lagu mideynayo maskaxdda iyo qalbiga dadka wanaaga jecel si ay uga hortagaan xummaanta Qabyaaladda.
Haddii aan ku guuleysano 1 Million oo qof, waxa aan awoodnaa inaan codkeena kaga hortagno nidaamka khaldan ee 4.5ka oo ah nidaam gebi ahaanba ku saleysan cadaalad darro iyo Qabyaalad.
Sidaa daraadeed fadlan waxaan kaa codsaneynaa inaad nagu soo biirtid si aan u taageerno dalkeena iyo dadkeena Insha’Allah.
Tribalism Research & Book (Baaritaan IYO Buugga Qabyaaladda)
Barnaamijka Tribalism Research & Book waa barnaamij cilmi baaris ah oo lagu baarayo farqiga u dhaxeeya Qabiilka iyo Qabyaaladda, micnaha Qabiilka, sida loo isticmaalo Qabiilka iyo waxa keena Qabyaaladda.
Waa barnaamij lagu baarayo waxa keena ama sababi kara Qabyaaladda. Waxaana ula-jeedada barnaamijkan ay tahay in la soo saaro buug ka hadlaya ama ka sheekeenaya dhacdooyin kala duwan oo la xiriira Qabyaaladda.
Waxaan ku rajo weynahay in mudo 3 sano gudahood ah aan ku guuleysano qoritaanka buugga, inaga oo taageero ka helayna quburo kala duwan oo ku wanaagsan xagga barista dhacdooyinka.
Waxaan buugga oo dhameystiran aan dooneynaa inaan u bandhigno ama ku darno nidaamka waxbarasho ee dalka Soomaaliya si dhallinyarada iyo caruurta Soomaaliyeed ay u bartaan farqiga u dhaxeeya Qabiilka iyo Qabyaaladda, ayna u fahmaan xummaanta iyo dhibaatada Qabyaaladda.
Heal Reconciliation (Dib U Heshiisiin Guud)
Barnaamijkaan waa barnaamij ula-jeedadiisu tahay in la hirgaliyo kulamo iyo shirar joogta ah oo looga hadlayo muhiimada ay leedahay dib u heshiisiinta.
Waxaan sanad waliba qabanaa ugu yaraan 3 kulan ama shir oo aan ku qabano 3 Qaaradood oo kala duwan. Ula jeedada barnaamijkan ayaa ah in la helo dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay heshiiyaan ayna iscafiyaan.
Wuxuu sidoo kale barnaamijku mar waliba xooga saarayaa sidii dadku ay iskugu dul-qaadan lahaayeen oo la isku tix-galin lahaa.
Wixii faah-faahin dheeraad ah iyo fikrado aad jeceshahay inaad nala wadaagto, fadlan waxaad nagala soo xiriirtaa ciwaanka iimeelkeena oo ah info@theatm.org ee sidaa iyo xiriir wacan, Insha’Allah. Mahadsanidiin.